Pnpkhabar.com | Popular Nepali News Portal आज वि.सं. २०७७ मंसिर ३ गते बुधवारको राशिफल हेर्नुहोस् - Pnpkhabar.com
आज वि.सं. २०७७ मंसिर ३ गते बुधवारको राशिफल हेर्नुहोस्
अरूको बारेमा चासो राख्दा स्वयं समस्यामा परिएला। अध्ययन र व्यापारमा सामान्य प्रगति हुनेछ। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय रहेकाले सजग रहनुहोला। दिउँसोदेखि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन्। रोकिएका काममा दाेहाेर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले फाइदा उठाउन सकिनेछ।
सोख र हडबडीले केही समस्या निम्त्याए पनि ज्ञान, कला र व्यक्तित्वमा निखारता आउने समय छ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट खानपानको अवसर प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहाेला। दिउँसोदेखि केही समस्या पनि देखा पर्नेछन्। विवादास्पद जिम्मेवारी आउनेछ भने खर्च बढ्ने सम्भावना छ।
खर्चिलाे कामले अर्थ अभाव हुन सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। आफ्नो प्रतिफलमाथि अरूले दाबी गर्न सक्छन्। मिहिनेतले उपलब्धि दिलाउनेछ। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। दिउँसोतिर पारिवारिक भेटघाटले खुसियाली छाउनेछ। नयाँ योजना थाल्ने समय छ। तर अरूको भरपर्दा काम बिग्रन सक्छ। आगन्तुकले पनि अलमल्याउन सक्छन्।